अस्थायी राजधानी ‘आतंक’
काठमाडौं । सरकारले प्रदेश अस्थायी राजधानी तोकेपछि असन्तुष्टि बग्रेल्ती देखिएका छन् । प्राविधिक टोलीले दिएको सुझावविपरित राजधानी तोक्ने काम गरेपछि असन्तुष्टि देखिएको हो । प्राविधिक टोलीलाई खटाएर अध्ययन गर्न लगाउने तर राजधानी तोक्दा टोलीले दिएको सुझावविपरीत निर्णय गरेपछि सरकारकै कारण आन्दोलन भइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा राजधानी तोक्ने कामले विवाद सिर्जना गरेको छ ।
मुख्यतया, राज्यको खेलाँची र अकमण्र्यताका देशभर असन्तुष्टिको आगो बोलिरहेको छ । सर्वपक्षीय सहमतिसंगै संघीयताको मर्म र सिद्धान्त अनुसार मुकाम तोक्न सरकार चुकेपछि यसरी असन्तुष्टि सडकमा आगो बनेर पोखिएको हो । सडकमा पोखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विवेक प्रयोग गर्न सकेन भने आन्दोलनका नाममा थप अराजकता निम्तिने पक्का छ ।
संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार समयमै कार्यसम्पदान गर्न नसक्दा यतिबेला देउवा सरकार सर्वत्र आलोचना खेप्दै छ । निर्वाचन अगावै प्रदेश मुकाम र प्रदेश प्रमुख तोक्न नसक्दा सरकार आन्दोलनको घेरामा पर्दै गएको छ । बुधबार सरकारले सातै प्रदेशको मुकाम तोकेपछि प्रस्तावित गरिएका कतिपय शहर विरुद्ध आन्दोलन चर्किएको छ । अनेकौं दाबी र तर्क प्रस्तुत गर्दै आफ्नो ठाउं प्रदेशको राजधानी हुन लायक छ भन्दै लामो समयदेखि लविङ गर्दै आएका प्रदेश नम्वर १ को धनकुटा, प्रदेश नं. २ को वीरगन्ज, प्रदेश न.ं ५ को दाङ, र प्रदेश नं. ७ को डोटी आन्दोलित बनेको छ । धनकुटा विगत एक महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । तर, सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकामको घोषणा गर्ने वित्तिकै आन्दोलन चर्किएको छ । बिहीबार बिहानैदेखि धनकुटामा हिंसात्मक प्रदर्शन भएको छ । क्रुद्ध आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप बिहानैदेखि भएको झडप बढ्दै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा आगजनी सम्म हुन थालेपछि प्रशासनले कफ्र्यू र निषेधाज्ञा नै जारी गर्न पुग्यो ।
वीरगंज, दाङ, दिपायल लगायतका शहरहरु आन्दोलनकारीको नियन्त्रणमा छन् । आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि स्थानीय प्रशासन कफ्रर्यू आदेश गर्न बाध्य भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गसंग जोडिका जिल्ला लगायतका अन्य जिल्लामा सवारी साधन उद्योग धन्दा, बन्दव्यापार, शैक्षिक संस्था ठप्प भएका छन् । आन्दोलन आक्रमक बन्दै गएको छ ।
दाङका आन्दोलनकारीले त राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नै विथोल्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले जनप्रतिनिधिलाई बन्धक बनाउनेदेखि सरकारी अधिकारीहरुलाई जिल्ला प्रवेशमा समेत रोक लगाउने चेतावनी दिएका छन् । राज्यलाई कर नतिर्ने सम्मको गम्भीर कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका दाङबासीले प्रदेशको अस्थायी मुकाम किन दाङ बन्न नसक्ने आधारहरु मागरेका छन् सरकारसँग ।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म आन्दोलन चर्किन थालेको छ । सडकमा तिब्र असन्तुष्टि बढेको छ । असन्तुष्टिप्रति देउवा सरकार वेमतलव देखिएको छ । प्रदेशका अस्थायी मुकामहरु मन्त्रीको भागवण्डा र बार्गेनिङमा बाँडिएका छन् । सरकार जनता जनता भिडाएर रमिता हेर्न थालेको छ ।
जनभावना अनुसारका काम गर्न नसकेको आरोप कामचलाउन देउवा सरकारलाई लाग्दै आएको छ । सरकारले संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश अस्थायी मुकाम नतोकेपछि आन्दोलनमा आउन बाध्य भएको आन्दोलनकारीहरुको तर्क छ ।
निर्वाचन जस्तो राष्ट्रिय महत्वको कार्यभार पुरा गरेको देउवा सरकारले निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि देखाएको सत्तालोलुप व्यवहारका कारण जस पाउने कुरै थिएन । बारम्बार जनविरोधी निर्णय र कार्यसम्पादनले सरकारको साख झन पछि झन गिर्यो । अहिले, सरकारले आफ्नै जनता भिडाउने रणनीति ल्यायो र भोलिको सरकारका लागि बाटोमा कांडो बिच्छयाइदियो । यो, सरकारको आफ्नै बुद्धि थियो या, आयातित बुद्धि, त्यो त इतिहासले भोलिको दिनममा निमर्मम समीक्षा गर्ला नै, अहिले सरकारले ‘रोम जल्दैछ, निरो बांसुरी बजाउंदै छ’ जस्तै गरी, देशैभर आगो बाल्ने वातावरण बनायो । समयमा काम नगर्दाको परिणाम थियो यो । सत्तास्वार्थसंग जोडिएका राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा देउवा सरकार सर्वत्र दबावपछि प्रदेश अस्थायी तोक्न त सरकार सक्यो तर उसले प्रदेश मुकाम तोकेपछि देशभर आन्दोलनका आगो बल्न थाल्यो । देशभर टायरका धुँवाले शहर प्रदुषित भइरहेका छन् । राजमार्ग ठप्प भएपछि जनताले सास्ती खेप्नु परेको छ । आ–आफ्नो स्वार्थसंग जोडिएका आन्दोलनले मुलक अशान्त बन्दै गएको छ । आफ्नै ठाउंमै मुकाम हुनुपर्छ भन्ने माग जब्बर बन्दै गएको छ ।
सबै समस्याको हल गर्ने दायित्व सरकारकै हो । सबैको सहमतिमा मुकाम तोकेर सरकारले आफ्नो विवेकता देखाउन सकेन । जसको परिणाम, मुलुक अराजकतातर्फ उन्मुख भएको छ । असन्तुष्टिका लप्का शहरका चोकचोकमा आगो बलिरहेको छन् । आफ्नो अनुकुलका माग उठिरहेका छन् । सरकारले संघीयताको मर्म अनुसार भौगलिक सुगमता प्रशासनिक केन्द्रियता भन्दा सीमित नेता स्वार्थमा मुकाम तोकेपछि आन्दोलन गर्न परेको आन्दोलनकारीको प्रतिक्रिया छ ।
दाङ दुःखी, बुटवल खुसी
प्रदेश नं. ५ का दुई विशेष महत्व बोकेका जिल्ला, दाङ र बुटवल । दुवै जिल्लामा केन्द्रीय तहमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने राजनीतिक दलका नेताहरु । यस प्रदेशको राजधानी बनाउने सबालमा भने दाङ भर्सेस रुपन्देही जस्तै देखियो । हेभिवेट नेताहरु बीचको महाभिडन्तमा रुपन्देहीले अस्थायी रुपमै सही, बाजी मार्यो । रुपन्देही, अर्थात बुटवल । अब बुटवल भर्सेस भैरहवा नहुनसक्छ । किनकी, जतासुकैबाट बुटवलकै पल्ला भारी पर्दै गएको छ, रुपन्देही भित्रै पनि ।
बुटवललाई प्रदेशको राजधानी नबनाए आन्दोलनका आंधीबेहरी ल्याउंछु भनेका थिए एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एकमहिना अघि । कांग्रेसका वालकृष्ण खांड रुपन्देहीका लागि लविङ गर्ने नै भए । प्रधानमन्त्री देउवाका कोटरीमा हुनुको फाइदा उनले उठाउने नै भए । कुल योग देउवा सरकारभित्र बुटवलको पल्ला भारी भयो ।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल ५ नं.को मुख्यमन्त्रीका निर्विवाद छन् । उनले दाङलाई नै प्रदेश राजधानी बनाउंछु भनेर वाचा गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले पनि दाङलाई नै राजधानी बनाउंछु भनेर दंगाली जनताको मत पाए । कांग्रेसका दिपक गिरी, डिल्ली चौधरी र खुमबहादुर खड्काको जोडबल पनि दाङ । तर हेभिवेट नेताहरुको बीचबाट पनि दाङ पछि पर्यो ।
प्रदेशको अस्थायी रेस्लिङमा बुटवल पक्ष हावी भएपछि बुटवल हर्षित भएको छ । सरकारले अस्थायी मुकाम घोषित के गरेको थियो, बुटवलवासीले सरकारी निर्णलाई स्वागत गर्न सडकमा उत्रिए दीप बोकेर । बुटबलबासीले घरघरमा दीप प्रज्वलन गरे । उनीहरुले पुष्पलाल चोकमा ¥याली समेत निकाले । अस्थायी राजधानी तोक्न भूमिका निर्वाह गर्ने सबै दलका नेताहरुलाई पश्चिम नेपाल यातायात ब्यवसायी संघका अध्यक्ष दधिराम खरेलले धन्यवाद प्रकट गरे ।
सरकारको निर्णयले बुटवलका उद्योगी ब्यवसायीहरुमा पनि उत्साही बनेका बनेका छन् । बुटवललाई प्रदेशको राजधानी बनाउन सके बुटवलले मुलुककै आर्थिक नेतृत्व गर्न सक्ने दाबी उनीहरुले गरे ।
बुटवललाई प्रदेश नम्बर ५ को अस्थायी राजधानी तोक्ने सरकारी निर्णयबाट रुपन्देहीका सबै दलका नेता तथा कार्यकर्ता खुशी भएका छन् । अब, बुटवललाई नै ५ नं. प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउ सक्दो प्रयास गर्ने वाचा गरेका छन् यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरुले पनि । हुन त, सरकारले अहिले तोकेको अस्थायी मुकाम सधैंभरका लागि होइन । स्थायी राजधानीको अन्तिम टुंगो प्रदेशसभाले लगाउने निश्चिछ छ । यतिबेला प्रदेशको अस्थायी मुकाम खडा गर्दा समर्थन र विरोध गर्नेहरुले प्रदेशसभाको निर्णय कुर्ने साहस पनि गर्न सक्नु पर्दछ । यस पटकको निर्वाचनमा बहुमत जुटाउन नसके अर्को निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याएर प्रदेश केन्द्र सार्न संबिधानले रोकेको पनि छैन । एक माघले जाडो नजाने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै संघीयता र गणतन्त्र बिरोधीलाई नै बल पुग्ने गरी समर्थन र विरोधमा नउत्री संवैधानिक बाटोबाट आफ्नो क्षेत्रको समानुपातिक विकासमा ध्यान पुर्याउन सबैले आवश्यक छ ।
हुन त मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ १४ गतको बैठकले परामर्शमा, प्रदेशको राजधानी तोक्ने प्रस्ताव तयार पार्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, प्रदेश राजधानीको निधो गर्नका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई संभावित शहरहरुमा रहेको मौजुदा भोतिक पूर्वाधारको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइयो । समितिले प्रतिवेदन पनि बुझायो सरकारलाई । तर, आफैले निर्देश गरेर तयार भएको प्रतिवेदनलाई सरकारले भन वास्ता गरेको देखिएन । अहिले, प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिएपछि देखिएको प्रतिक्रिया पनि यसकैको परिणाम हो ।
प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न संघीयताको मर्म अनुसार भन्दा शक्ति समूहको प्रभावमा परेर निर्णय गरेको आरोप लागेको छ सरकारमाथि । भौगलिक सुगमता र प्रशासनिक सुगमतालाई सरकारले मनन् गर्न सकेनन् । यद्यपि संविधान जारी भएलगत्तै सडकमा मुकाम मागका आन्दोलनहरु हुदै थिए । धनकुटा दाङ, डोटी वीरगंजमा आन्दोलनका संकेतहरु देखिदै थिए । प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि हुँदै आएका थिए । ती कुनै पनि संकेतलाई सरकारले वास्ता गरेन । आन्दोलन भए भैजाला भन्ने हल्ला सोचाई रह्यो सरकारमा ।
निर्वाचनपछि बाम गठबन्धन लगायतका राजनीतिक शक्तिहरुले सरकारले नै मुकाम तोक्नुपर्ने दबाव दिएका थिए । तर सरकार आफ्नो चरित्र अनुसार अगाडि बढ्दै गयो र अन्तमा, घाम डुब्ने बेलामा प्रदेशका अस्थायी मुकामको भागवण्डे टुंगो लगायो । सरकारी भागवण्डासँगै सडक अशान्त बनेको छ । सडकमा सरकार विरोधी कदम छताछुल्ल भएको छ । सरकार संघीयताको मर्म अनुसार अघि बढ्न नसकेको आरोप लागेको छ ।
त्यसो त, तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै २०७३ चैत मसान्तभित्र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । ओली सरकार विघटनपछि उक्त कार्यतालिका कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन । पछिल्लो दलीय धु्रवीकरणले मुख्य दलहरु झन पछि झन विभक्त भए । दलहरु विभक्त हुंदा जनता पनि विभक्त भए । अहिले, प्रदेश मुकामको विषय भने क्षेत्रीयता र भेगीय मानसिकता हावी भएको छ । सबै दल निकट जनता आफ्नैमा मुकाम हुनुपर्छ भन्नेमा लागे । र, उनीहरुले अहिले बल मिच्र्याँइकै भरमा मुकाम तोकिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
संविधानमा भएका केही जटिलताको छिद्रताका कारण निर्वाचन सम्पन्न भएर पनि नयाँ सरकार गठन हुन सकेन । कांग्रेसले त्यही छिद्रतामा टेकेर नयां सरकार गठनको बाटो छेक्दै ढिलाई गर्दै गयो । जनादेश गुमाएको सरकारले मनपरि गर्दै निर्णयहरु गर्दै आयो ।
यद्यपि प्रदेश मुकामको हकमा सरकारले नै तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था त छ । तथापी, सरकारले निर्वाचन पहिल्यै गर्नुपर्ने काम अन्तिममा गर्यो । जसका कारण अहिले तनाव बढ्यो ।
प्रदेशको स्थायी मुकामको निधो गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रदेश सभालाई भएको हुँदा देउवा सरकार निर्णय उल्टिन सक्छ । वर्तमान सरकार जनमत गुमाइसकेको र संविधानले समेत प्रदेश सभालाई अधिकार दिएकोले स्थायी मुकामको भविष्य अबका प्रदेश सभाको काँधमा पुगेको छ । अल्पकालका लागि भएको यो निर्णय भोलि परिवर्तन हुनसक्ने संकेत गरेका छन्, वेटिङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ।
तत्कालका लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नैका लागि मात्र भएको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । आन्दोलनकारीले पनि यो बाध्यता बुझ्न जरुरी छ । सबै ठाउंमा प्रदेश मुकाम तोक्न सक्नै कुरै भएन । यसर्थ, समर्थन र विरोध स्वभाविक छ । तर, यही विषय थप उचालिंदै गयो भने भोलि क्षेत्रीय अखण्डतामै सवाल उठ्नसक्छ । सबैको चाहना आफ्नै क्षेत्रमा प्रदेश मुकाम तोक्न माग गर्नु स्वभाविक हुनसक्छ । तर, तर्कसंगत र न्यायसंगत हुन सक्दैन ।